ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “သုခဘုံ နဲ့ ဒုက္ခဘုံ”
သစ်ကိုင်းလွတ်နေတဲ့ မျောက်အဖော်တွေ ရှိပါသေးတယ်လေ....
ရေးသားပုံ တယ်မိုက်ပါလား။ သဘောကျတယ် ကိုပေါရေ။
တခြမ်းပူ တခြမ်းအေးဆိုရင် လေဖြတ်မှာတော့ သတိထား။
u r dead right!
ဟိဟိ...... ဟို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအမည်လိုပေါ့။ “မျက်နှာတခြမ်းက အိုးမဲနဲ့” လေ။း-)
သိန်းထိုက်..... ကွန်မင့်လေးကလည်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အဖိုးထိုက်တန်ပါပေ့ကွယ်....ဟိ။
ဆင်ဒဏ်လား..... သစ်ကိုင်းလွတ်သော် မျောက်အဖော်တို့ ဟစ်အော်ပူဆွေး မငိုကြွေးလင့်။ သစ်ကိုင်းလွတ်လည်း ချွတ်ကနဲတမျှ ခြုံပေါ်ကျလျှင် ချွတ်ခြုံကျခြင်း ကြုံပေအံ့။
ပန်ဒိုရာ..... လေဖြတ်လို့ မလှုပ်နိုင်ရင်တော့ သူနာပြုမငှားဘဲ... ကရိန်းအရင် ငှားရကိန်းရှိတယ်။
အမည်မသိ..... အမှန်တွေကို ပြောတာဘဲလေ။ မှန်ရမှာပေါ့။
ကိုရွှေအောင်..... ဘယ့်နှယ် လူတွေနဲ့ ရောမှတော့ မျောက်ဖြစ်ပါတော့မလား။ လူဘဲ ဖြစ်မှာပေါ့.....ကွိကွိ
ကိုပေါရေ.. ငြိမ်းတို့အားလုံး မျောက်တွေပေ့ါနော်။ မျောက်အဖော်တွေ အများကြီးပဲ။ ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံ မျောက်များပေါ့..ဟိဟိဟိ..
Peter kyaw….. ကောင်းကင်ကိုရဲ့ လက်ရာကိုတော့ မမှီပါဘူးဗျာ။
ငြိမ်း…… ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံ မျောက်များဆိုတော့ အတိုကောက် အိုဘီအမ်ပေါ့။ အိုဘီပီနဲ့ အပြိုင် ကြဲလို့ရပြီ။
စုသမီး…… မြင့်တယ်ဆိုပြီး ခုန်ချချင်နေတာဟုတ်။ နောက်စကားပုံတမျိုးက မွဲချင်တဲ့နတ် ပြာပုံတိုးဆိုလားဘာလား။
sorry about our country! hmmmmmm.